Iindaba - Yintoni i-hexagonal wire mesh
Yintoni i-hexagonal wire mesh
Umnatha wocingo olunehexagonal ngomnye womnatha wocingo olunomngxuma omacala mathandathu. Olu hlobo lomnatha wocingo olunamacala amathandathu lulukwa ngocingo lwentsimbi, ucingo olusezantsi lwekhabhoni yentsimbi okanye ucingo lwentsimbi engenakutyiwa. kunye ne-pvc coated.Ukuba ukhetha i-galvanized eshushu, kukho iindlela ezimbini: enye ishushu ifakwe igalvanized phambi kokulukwa, enye ishushu ifakwe igalvanized emva kokulukwa.
Ukukhuselwa kwe-PVC kuya kwandisa kakhulu ukusetyenziswa kobomi be-wire mesh.Kwaye ngokukhethwa kombala ohlukeneyo unokudibaniswa kunye nokusingqongileyo kwendalo.
Umnatha wocingo olunehexagonal unokwahlulwa ube ngumnatha wocingo olunehexagonal olulula kunye nenethi yocingo enzima enamacala amathandathu.
Ngoko ke, umnatha wocingo olunehexagonal olunesiqingatha socingo usebenzisa idiamitha ye-0.3mm ukuya kwi-2.0mm; pvc yatyatyekwa iplastiki enetha enamacala amathandathu kusetyenziswa idiameter yocingo ye-0.8mm ukuya kwi-2.6mm yocingo lwesinyithi lwe-pvc. Ijijelwe kwimilo yomngxuma ene-hexagonal, umphetho womgca wetoti. yenziwe ibe licala elinye kunye nelinye.
Iqhele ukusetyenziswa kwimizi-mveliso, ulwakhiwo kunye nezolimo.Ikwasetyenziswa ngokubanzi njengocingo.Njengekheji yeenkukhu,ukhuseleko lwezilwanyana.Ukuba ufuna ukusebenzisa umnatha wocingo olunehexagonal njengomhombiso wakho weKrisimesi, lukhetho oluhle.Nangona kunjalo, ungakhetha ngokutsho iimfuno zakho.
I-2.Ikhono elinamandla lokuxhathisa umonakalo wendalo ukuxhathisa kunye nokuchasana nemiphumo emibi yemozulu.
3.Inokumelana noluhlu olubanzi lwe-deformation, kodwa ingawi.
I-4.Isiseko senkqubo egqwesileyo siqinisekisa ukufana kobunzima bokugquma kunye nokuxhathisa okunamandla kokuhlwa.
5.Gcina kwiindleko zokuhamba.Inokuthi icuthwe ibe yimiqulu emincinci kwaye isongelwe ngephepha elingangenwa bumanzi, ithathe indawo encinci.
Umngxuma we-6.Mesh umhle kwaye usemgangathweni .Ukuvulwa kweMesh kunokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zomthengi.
1.Udonga lwesakhiwo esilungisiweyo, ukugquma ubushushu
2.Ukhuseleko lwendawo yokuhlala, ukukhuselwa kobume bendawo
4.Khusela kwaye uxhase iindonga zolwandle, iinduli, iindlela kunye neebhulorho.